Muxuu Cristiano Ronaldo dheer yahay xiddigaha kubadda cagta ciyaara? | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Muxuu Cristiano Ronaldo dheer yahay xiddigaha kubadda cagta ciyaara?
Cristiano Ronaldo oo ah laacibka ku guuleystay wixii abaal-marinno shaqsi ahaaneed isagoo ku soo qaaday horyaallo kala duwan iyo koobab Waddamada Ingiriiska iyo Spain ayaa waxa uu haystaa koobab badan oo Champions League ah.
Waxa uu sidoo kale sanadkii 2016-kii ku guuleystay koobkii qarammada Yurub, arrimahaas oo dhan ayaa Cristiano Ronaldo waxa ay ka dhigeen shaqsi caan ah oo qandaraasyo badan kula jira shirkado caalami ah oo uu badeecadahooda iyo waxa ay sameeyaan u iib-geeyo.
Laakiin Ronaldo ayaa waxa uu ciyaartoyda kale ee kubadda cagta ciyaarta dheer yahay, isagoo ah ganacsade lacago fara badan oo malaayiin dollar ah ka sameeya dhinaca xayeysiimaha, isagoo ka faa’iideysanaya waqtiga wacan iyo waayaha wanaagsan oo uu ku sugan yahay, waxaana uu 58,418,493 taageere uu ku leeyahay bartiisa Twitter-ka.
MAXAA KA MID AH WAXYAABAHA UU IIBIYO RONALDO?
Waxyaaba uu Cristiano Ronaldo iibiyo waxaa ka mid ah qalabka isboortiga ee ay soo saarto Shirkadda Nike oo fadhigeedu yahay gobolka Oregon ee dalka Mareykanka, waxaana bishii November ee sanadkii 2015-kii Ronaldo shirkaddaasi la galay heshiis qiimihiisu dhammaa 1 bilyan oo dollar, iyadoo CR7 uu wax waliba oo ay soo saarto shirkaddaasi u xayeysiiyo illaa iyo maanta.
Ronaldo ayaa sidoo kale heshiis kula jira shirkadda PokerStars ee dhinaca qammaarka, waxaana kabtanka Portugal uu shirkadani ku soo biiray bishii May sanadkii 2015, iyadoo illaa iyo haddana aan la ogeyn qandaraaska ay shirkaddaasi la gashay inta uu gaarsiisan yahay, laakiin waxaa la tilmaamayaa inuu yahay mid aad iyo aad qaali u ah.
Ronaldo ayaa muuqaallo Gaa-gaaban oo ku saabsan ganacsigiisa mar walba soo dhiga bartiisa Twitter-ka, waxaana kaddib uu la wadaagaa malaayiinta taageerayaasha ah ee uu ku leeyahay caalamka, taasoo sare u qaadaysa sumcaddiisa ciyaaryahannimo.
Shirkadaha kale ee uu Ronaldo xayeysiinta u sameeyo oo uu sida joogta ah lacagaha uga qaato waxaa ka mid ah Tag Heuer oo soo saarta saacadaha uu ku xarragoodo Cristiano Ronaldo midba midda ay ka qiimaha badan tahay, midba midda ay ka dambeysay, haddii ay ahaan lahayd saacadaha gacanta ee ay Madaxdu xirtaan iyo kuwa isboortiga labadaba, waxaana weeraryahanka Real Madrid uu shirkaddani xayeysiin u sameynayey tan iyo sanadkii 2014-kii, iyadoo sidoo kale aan la ogeyn inta uu la egyahay heshiiska uu Ronaldo la galay shirkadan.
Marka ay timaado dhinaca Technology-gana Ronaldo kama marna, waxaana dhawaan uu soo bandhigay barnaamij ciyaareed laga dhex ciyaaro Mobile-lada gacanta iyo Computer-ada, kaasoo lagu magacaabo “Cristiano Ronaldo: Kick’n’Run” waa (Darbeey oo carar), barnaamijkaasina waa isaga oo kubbad ku dhex dar-darbeyna Magaalo lagu qiyaasay inay tahay Paris.
Marka aad Game-kaasi ciyaartid waxa aad uruursanaysaa dhibcihii ugu sarreeyey, Ronaldo ayaana boggiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay “Anigu waxaan haystaa dhibcaha ugu sarreeya 429 ee adiguna itus xirfaddaada oo ciyaar ciyaartaan.
Intaa waxaa dheer Ronaldo Barnaamijyada Mobile-lada ku jira uu soo bandhigay kaasoo aad ka heli karto Play Store-ka, waxaana uu soo bandhigay barnaamij la yiraahdo “CR7 Selfie app by Cristiano Ronaldo,” oo ah barnaamij aad isaga qaadayso sawir Selfie ah, kaddibna waxa aad Background-ka ku qurxinaysaa Cristiano Ronaldo.
Ronaldo waxaa kale oo uu heshiis kula jiraa hay’adda badbaadada carruurta ee Save the Children iyadoo waayadii la soo dhaafay la arkayey isagoo ka qeyb qaadanaya Barnaamijyo lagu kaalmeynayo carruurta dhibaataysan ee ku kala nool daafaha Dunida, waxaana uu bixiyey deeqo fara badan oo lacageed oo lagu caawinayo haddii ay ahaan lahaayeen carruurta dagaallada ku sugan ee Syria iyo kuwa dhibaatooyinka kale dhexda kaga jira.
Waxaa kale oo uu Cristiano Ronaldo ka mid yahay ciyaartoyda faro ku tiriska ah ee kubadda cagta ciyaarta oo dhiiggooda taba-rucay ama dad u baahan dhiiggooda u miiray.
Shirkadda dhinaca isgaarsiinta Portuguese-ka ee la yiraahdo MEO ayaa iyadana ka mid ah shirkadaha uu heshiiska kula jiro Cristiano Ronaldo.
Waxyaabaha sida aad ah loola yaabay ee uu sameeyey Cristiano Ronaldo waxaa ka mid ah inuu soo saaray bustaha lagu seexdo oo uu magaciisa ku qoran yahay, taasoo uu ku soo dhigay bartiisa Twitter-ka, isla markaana ugu baaqay taageerayaashiisa inay iibsadaan.
Shirkadda ‘Sacoor Brothers’ ayaa ka mid ah shirkadaha uu qandaraaska kula jiro Cristiano Ronaldo, waxaana shirkaddan oo dalka Portugal laga leeyahay oo sameysa dharka lagu xarragoodo ee suudadka ‘Suits’ oo uu Ronaldo heshiis la galay sanadkii 2016, waxaana shirkaddan oo aan sidaasi caan u ahayn xayeysiimaha uu u samayno CR7 ka dhigayaa mid magac wayn leh oo caan ah.
Ronaldo waxa uu leeyahay shirkado soo saara labiskiisa sida surweellada Jeemisyada ah, Shaararka, funaanadaha, Jaakadaha, dharka hoos gashiga ah iyo kabaha uu xirto.
Waxaa kale oo uu xiddiga kooxda Real Madrid heshiis kula jiraa shirkadaha ka shaqeeya dhanka isqurxinta ee soo saara waxyaaba la isku qurxiyo sida Clear iyo Herbalife.
Ganacsade Ronaldo waxaa kale oo uu leeyahay taxane Hoteelo ah oo uu isagu isugu magacdaray oo la yiraahdo ‘Pestana CR7’ waxayna ka soo bilowdaan Waddankiisa Portugal, isagoo taageerayaashiisana ugu baaqa inay hoteeladiisa tagaan, seexdaan kana cunteeyaan.
Shirkadda laga leeyahay Japan ee SixPad oo soo saarta waxyaabaha jirka la saarto ee qofku uu yeelanayo murqo SixPad (Lixda dhagax ee caloosha), ‘tusaale yar haddii aan idin siiyo marka uu qofku laqabkaas yar caloosha saarto waxaa lagu leeyahay waxaa u soo baxayaa murqaha caloosha’ ayaa ka mid ah shirkadaha uu Ronaldo heshiiska joogta ah kula jiro.
Bishii la soo dhaafay ee Agoosto Ronaldo waxa uu xayeysiin u sameeyey shirkadda laga leeyahay dalka Masar ee birta sameysa ee la yiraahdo ‘Egyptian Steel’ shirkaddaas oo doonaysa inay noqoto midda koowaad ee Waddankaasi ee looga haray sameynta ama soo saarista birta, waxaana xayeysiinta uu shirkaddan u sameeyey xiddigan ka muuqda Ronaldo oo xoogaa yar oo af-carabi ah tuuranaya.
Dabcan sidoo kale shirkadda ciyaar-gacameedka Playstation-ka sameysa ee EA SPORT ayaa ka mid ah shirkadaha ee laacibka Portugal heshiiska kula jiro.
Isku soo wada duuboo, Cristiano Ronaldo ayaa sanadkii la soo dhaafay waxa uu noqday ciyaartoyga ugu daqliga badan Caalamka xiddigaha ciyaara, isagoo ay jeebkiisa soo gasho 93 milyan oo dollar 12 bilood oo qura, waxaana 93-kaas milyan oo dollar ku jira 35 milyan oo uu ka helay xayeysiimaha uu shirkadaha u sameeyo.